I-italic font: iifonti esizicebisayo kuyilo lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-italic font: iifonti esizicebisayo
Xa unomsebenzi wokwenza, papasha incwadi, thaca iprojekthi, ukukhetha ifonti efanelekileyo kunokuba kubaluleke kakhulu kunokuba ucinga. Kuxhomekeke kwinjongo ofuna ukuyifeza ngalo msebenzi, unokukhetha ileta eyahlukileyo, isitayile esahlukileyo. Ngapha koko, ukhetho olubi luya kuthintela abantu ekunxibelelaneni nomyalezo oza kudluliselwa. Kwaye, amaxesha amaninzi, siyakutyeshela ukusetyenziswa oonobumba abohlukeneyo, njengobhalo olukekeleyo kunye noonobumba bayo.
Ukukunceda uqonde yintoni ikekelisiwe kwaye ndikunike ukhetho lweefonti zolu hlobo lobunjani, ngaphambi kokuba uyazi ngakumbi. Kwaye yile nto siza kuyenza ngokulandelayo.
1 Yintoni ubhalo olukekeleyo
1.1 I-italics: iifonti kunye neempawu
2 Yintoni efanele ukwenzelwa yona?
3 I-italic font: iifonti onokuthi uzisebenzise
3.1 Ukudanisa iSkripthi
3.3 UHerr Von Muellerhoff
3.7 Inkulungwane ye-18 yeKurrent
3.8 Ikofu entle
Yintoni ubhalo olukekeleyo
I-Italic yaziwa ngokuba yi ubhale ngesandla okanye unobumba. Yindlela yokubhala efanayo naleyo ubhala ngayo, ngokuthambekela koonobumba, kunye noonobumba okanye ngaphandle konxibelelwano ...
Olu hlobo lochwethezi lujikeleze amakhulu eminyaka. Ngapha koko, kunjalo Ileta ebhalwe ngesandla yile yaqala ukusetyenziswa ukubhala imibongo, iincwadi, njl. kuba ngaphambili ibingabantu "abakopa" imibhalo yokwenza iincwadi kunye nabo, kwaye zonke zazibhalwe ngale leta.
Nangona kunjalo, eyona ifana nale siyisebenzisayo ngoku ivela kwinkulungwane ye-XNUMX, apho sinokubona imizekelo yayo kwizikhumba, ebhalwe ngesandla ngosiba nangeinki.
Kungekudala emva koko, i-aristocracy yase-Bhritane yathatha isigqibo sokukrola lo mbhalo kumacwecwe obhedu ukuze usetyenziselwe ukushicilela, kwaye ukuchuma kwaqala ukuhombisa iimpapasho ezininzi. Ngapha koko, incopho yayo yayikwiminyaka yama-70s, kwaye ayigwetywanga ukuba iya kubuyela kwifashoni ngexesha elifutshane.
I-italics: iifonti kunye neempawu
Namhlanje, akekeliswe kunye neefonti zayo banokungafezeki, okwenza ukuba babonakale behlukile, isitayile ngokungathi ubhala ngepeni okanye ngebrashi, kwaye ilayishwe, ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci, ngokuchuma.
Uninzi lwazo kulula ukuzifunda, nangona zikhona ezinye, ngenxa yotyekelo kunye nendlela yokubhala, engafundekiyo, ngakumbi ukuba isayizi enkulu yefonti ayisetyenziswanga.
Yintoni efanele ukwenzelwa yona?
Nokuba unganakho na sebenzisa amagama akekeleyo kwiifonti ezahlukeneyo, zombini simahla kwaye zihlawulwe, inyani kukuba olu hlobo lokubhala lusetyenziselwa iinjongo ezichaziweyo. Umzekelo:
Ukubeka amagama angaphandle: kuyinto eqhelekileyo ukuba, xa ubhala isivakalisi esinegama elibhalwe ngolunye ulwimi (isiFrentshi, isiNgesi, isiTaliyane ...) kwisicatshulwa saseSpain, elo gama lifakwe kumalukeke.
Ukubeka iziteketiso, okanye amagama angamagama abizwa ngegama, hayi amagama okwenyani.
Kwimeko yezihloko, nokuba ziimovie, iincwadi, njl.
Ngamagama eentlobo, oko kukuthi, igama lesayensi lesilwanyana okanye lesityalo.
Ngamagama afanelekileyo ezinto zothutho (i-Orient Express, i-Renfe, i-Alsa ...).
Ukuba uthetha amagama ezimo zezulu (Filomena, Katrina ...).
Nangona oku kuyinto eqhelekileyo kukekelisiwe kunye nokusetyenziswa kweefonti zayo, inyani kukuba kukho iimeko "ezikhethekileyo" apho unokuzisebenzisa. Umzekelo, inokuba yeemeko ezisesikweni, ezinje ngokubhala isimemo somtshato, ileta yothando, okanye ukwenza isihloko kunye nezihloko ezitsala umdla, nokuba kukwimagazini, umsebenzi, incwadi ...
Kumaphepha ewebhu, okanye izinto ezinxulumene noyilo, i-italics inokuthi ithathelwe ingqalelo. Ingxaki yile olu hlobo lochwethezo akukho lula ukuluqonda xa uqala nje Kwaye, nangona intle ngokubonakalayo, inokwenza kube nzima ukuba umyalezo ungene, yiyo loo nto uninzi luthanda ukushiya ezi ntlobo zefonti "zokuhombisa".
I-italic font: iifonti onokuthi uzisebenzise
Apha ngezantsi senze ifayile ye- Ukudityaniswa kwamagama athile akekeleyo onokuwasebenzisa xa ufuna wona. Ewe kunjalo, khumbula ukuba awufanelanga ubaphathe gadalala okoko, ukuba uyilo oza kulubeka luxinekile, ifonti ngokwayo inokuba ninzi kakhulu kuseto lokugqibela.
Ezi zizindululo zethu:
I-Italicized, yenye yezona zinto zilungileyo onokuzisebenzisa. Kuluncedo ukuba, Nangona iileta ziqhotyoshelwe, kwaye zinokuchuma, kulula ukuba zifundwe kwaye ziqondwe kakuhle, ke unokuyifaka kwiiblogi, upapasho, njl.
Ewe kunjalo, akukho semthethweni ukuba sithi, kodwa kungaphakathi kwimigca ye-italic engaqhelekanga. Okwangoku, inokuba intle kwiiprojekthi zakho, ngakumbi ukuba ufuna ukuba ivele ngenxa yesibindi esiphumayo.
I-Allura yenye yeefonti ze-italic onokuzisebenzisa. Kucace gca, ngokungathi ubhala ngesandla, kwaye iyanda Okwangoku, isenokufundeka ngokufanelekileyo. Ekuphela kwento ethi, ngamanye amaxesha, kuya kufuneka unike i- ubungakanani obukhulu kunesiqhelo ukuze iqondwe kakuhle.
Ngeelogo, izimemo, njl. inokugqibelela.
UHerr Von Muellerhoff
Siqala ngohlobo lwamagama akekelisiweyo esiya kusiba nzima ngakumbi ukufunda, okokuqala kuba bonke oonobumba basondele kakhulu, kwaye okwesibini kuba ubatyibilikisela ngasekunene. Kunye noyilo ileta iya kubonakala ngokungathi igama ngalinye liyinxalenye yomculo onesitayile.
Intle izivakalisi ezifutshane kuba ukuba ubeka isicatshulwa esikhulu kakhulu kunokuba nzima ukufikelela esiphelweni ngaso.
Ukuba ujonga uhlobo lwamagama akekeleyo Unobumba abakhulu abazele ii-curls kunye noyilo oluntsonkothileyo, le inokuba yenye yezona zibalaseleyo. Kwaye yile, ngelixa icala elisezantsi lihle kwaye lifundeka lula, lelona tyala liphezulu eliya kuthi libangele abasebenzisi xa bezibona.
Siyicebisa ngakumbi ngezihloko (umzekelo ezincwadini, kwizahluko ...).
Uyakhumbula ukuba kukho abantu abathi xa bebhala bangayiqondi kakuhle le nto bayibekileyo? Ewe ngeePopsies ungayilingisa loo nto, inyani yokutsala umdla kuba awazi ukuba ibeka into ethile okanye enye.
Es ilungele ukwahlula isicatshulwa esiqhelekileyo, ukutsala umdla kunye nomnqweno wokwazi ukuba unxibe ntoni.
Kwiileta ezinobumba, yenye yeefonti eziza kukubonelela ngonobumba ochuma kunye nonobumba. Kwaye kunjalo ngaphakathi iileta ezithile ziya kukugcwalisa ngamanqatha, ii-curls kunye nezinye iinkcukacha ezenza ngokwazo, ukuhonjiswa okupheleleyo kwawo nawuphi na umsayino okanye isihloko (ngaphandle kokudibanisa enye into)
Inkulungwane ye-18 yeKurrent
Asikukhuthazi ukuba le fonti isetyenziswe ngokugqithileyo, kuba kunzima ukuyifunda, kodwa ukuba ubeka ubungakanani obufanelekileyo kwaye uyisebenzisela amagama angatshatanga (angadluli kwi-3) inokuba nomtsalane.
Ewe kunjalo, gcina engqondweni ukuba indlela oza kuyithatha kukubeka isicatshulwa kodwa ungakhathali ukuba ayifundeki, kuba luyilo ngokwalo ekufuneka lubambe umfundi.
Le fonti yenye yezona zicocekileyo kunye nesitayile. Kwaye yile, nangona ikekelisiwe, ushiya kuphela ukukhula ekugqibeleni. ukuyenza ibonakale ngathi iyazenzela ngamaza kunye namagophe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » I-italic font: iifonti esizicebisayo
Eyona mhleli ifoto yasimahla yePC
Yintoni iAdobe Camera RAW Resolution Super: Guqula imifanekiso yeHDHD ibe yi4K